विश्वकपले प्रमाणित गर्‍यो: मेस्सी ठूलो कि रोनाल्डो? - खेल - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
| १० बैशाख २०७६, मंगलबार
विश्वकपले प्रमाणित गर्‍यो: मेस्सी ठूलो कि रोनाल्डो?
मार्टिन रोजर्स असार ९
क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्वार्थी, घमन्डी, आफैँलाई मात्र माया गर्ने र सबैको ध्यान आफूमा मात्रै केन्द्रीत होस भन्ने स्वभावका छन्। लियोनल मेस्सीमा कुनै स्वार्थ देखिँदैन, नम्र छन्, टिमद्वारा स्वचालित हुन्छन् र इमान्दार छन्। आधुनिक फुटबलका यी बादशाहको कहानी व्यक्त गर्न धेरैले यी शब्दहरु खर्चिए। तुलना गर्दा मानिसहरुले एउटालाई नायक र अर्कालाई खलनायक बनाए।
के बोके दाह्री समाएर सेलिब्रेसन गर्दै रोनाल्डोले मेस्सीलार्इ छेड हानेका हुन्?
यी खेलाडीबीच को सर्वाेत्कृष्ट? भन्ने बहस २००८ बाट सुरु भएको हो। त्यसबेला पहिलोपटक रोनाल्डोले बालोन डि’ओर अवार्ड जितेका थिए। यो अवार्ड विश्वका सर्बोत्कृष्ट खेलाडीले पाउने गर्छन्। त्यसयता मेस्सी र रोनाल्डोले समान ५–५ पटक यो अवार्ड जितेका छन्। उनीहरु बाहेक अरू कुनै खेलाडीले पनि २००८ यता यो अवार्डको दाबेदारी प्रस्तुत गर्न सकेको छैनन्।
म्यानचेस्टर युनाइटेडबाट रियल मड्रिड पुगेका रोनाल्डो र बार्सिलोनाका आजीवन सदस्य मेस्सी दुवै जना क्लबका लागि भने ट्रफीको प्रेरणा सावित भए। रोनाल्डोले २ पटक च्याम्पियन्स लिग र ३ पटक लालिगा उपाधि जिते र पाँच पटक च्याम्पियन्स लिग उपाधि चुमे। मेस्सीले ९ पटक लालिगा र पाँच पटक च्याम्पियन्स लिग उपाधि दिलाए। यी प्रतियोगिताहरुमा उनीहरु दुबै शीर्ष गोलकर्ता हुन्। थुप्रै गोलमा सहायकको भूमिका पनि निर्वाह गरेका छन्।
मेस्सी र रोनाल्डो
विपक्षी टोलीका खेलाडीहरुलाई मूर्ख बनाउने कलाले उनीहरु निपूण छन्। तीव्र गती र तागत रोनाल्डोका हतियार हुन्। मेस्सीसँग गज्जबको सन्तुलन कायम राख्ने क्षमता र तीव्रगतिमा अघि बढ्दै खुट्टाले चाल परिवर्तन गरेर विपक्षी खेलाडीलाई छकाउने विशेष कला छ।
उनीहरुमध्ये को सर्बोश्रेष्ठ भनेर चुन्न पहिले निकै कठिन थियो। तर, अब रहेन। रोनाल्डो औषत टिम लिएर विश्वकपमा हुँकार फुक्दैछन् भने मेस्सी टोलीमा मिल्न नसकेको खेलाडि झै अनुहार झुकाएर मैदानबाट बाहिरिरहेका छन्। जसले २१ औं शताब्दीको सर्वश्रेष्ठ खेलाडी को हो? भन्ने सवालको पनि जवाफ दिएको छ। मेस्सीले गर्नुपरेको संघर्षलाई रोनाल्डोको बेजोड प्रस्तुतिले फिका बनाइदिएको छ। पहिलो खेलमा ह्याट्रिक र दोस्रो खेलमा निर्णायक गोल गरेर रोनाल्डोले सबैको ध्यान आफूतिर खिचेका छन्। पहिलो खेलमा पेनाल्टी चुकेका र दोस्रो खेलमा अपेक्षित प्रदर्शन गर्न नसक्दा मेस्सी आलोचित छन्।
मेस्सीले प्रतिभावान अर्जेन्टिनी खेलाडीहरुको साथ नपाएको पनि हैन। तर, कोपा अमेरिका र विश्वकपको फाइनलमा पुगे पनि उनले अर्जेन्टिनालाई ट्रफी दिलाउन सकेनन्। चार वर्ष अगाडि जर्मनीले विश्वकप उचालेको दृश्य टुलुटुलु हेर्दै उनले विश्वको सवोत्कृष्ट खेलाडीको अवार्ड ग्रहण गरेका थिए। उनी उपाधिको नजिक पुगे तर उपाधिको नजिक पुग्नु मात्रै सर्बोत्कृष्ट खेलाडी हुनुको मापदण्ड हैन।
रोनाल्डोले औषत पोर्चुगललाई लिएर २०१६ को युरोपियन च्याम्पियन्ससिप जितेका थिए। फाइनलमा उनी घाइते हुँदै मैदानबाट बाहिरिए पनि औषत टोलीमा उनको प्रभाव बाँकी नै थियो। उनका औषत सहकर्मीहरुले उपाधि उपहार दिए। त्याे क्षणमा घाइते रोनाल्डो सबैभन्दा बढी खुशी देखिन्थे।
जारी विश्वकपमा पनि धेरै कमले मात्रै पोर्चुगललाई उपाधि दाबेदार टोली मानेका छन्। सबैले पोर्चुगललाई मध्यम टोली भएको र रोनाल्डोलाई टोलीबाट निकालिदिने हो भने पोर्चुगल विश्वकप खेल्न लायक टोली नै नरहनेसम्म प्रतिक्रिया दिएका थिए।
राेनाल्डाेले सुरुवाती दुई खेलमा उनले आफ्नो महत्व दर्शाइ सकेका छन्। पहिलो खेलमा बलियो स्पेनविरुद्ध ह्याटिक गरेका उनले दोस्रो खेलमा मोरोक्कोविरुद्ध निर्णायक एक गोल गरे। जब उनीमाथि आवश्यकताको बोझ थपिएको थियो उनले आफ्नो जिम्मेवारी कुशलताका साथ निर्वाह गरे। र फेरि सबैको ध्यान आफू तिर्न खिच्न सफल भए।
बलिया प्रतिद्वन्द्वी भएकाले विश्वकपको उपाधि उचाल्न रोनाल्डोका लागि निकै जटिल छ। तर उनले पाएका अवसरहरुहरुको सदुपयोग गर्दै आफूलाई अघि बढाउने दृढ संकल्प देखाएका छन्। मेस्सीमा नदेखिएकाे खुबी त्यही नै हो। उनी निराश र उदास छन्। कतिबेला उनका स्वभावहरु यस्ता देखिन्छन् कि उनी यो विश्वकप खेल्नै चाहँदैन थिए। जबर्जस्ती खेलिरहेका छन्।
कुनैबेला यस्तो समय पनि थियो। जतिबेला मेस्सीले रोनाल्डोलाई पुरै छायामा पारेका थिए। त्यो २०१४ को विश्वकप थियो। पोर्चुगल समूह चरणबाटै बाहिरिएको थियो। जहाँ मेस्सीले अर्जेन्टिनालाई प्रतियोगिता उचाल्ने संघारमा पुर्याएका थिए। उनले उपाधि उचाल्न सकेनन् र अब सायदै कहिलै उचाल्नेछन्।
तर १९८६ पछि विश्वकप उचाल्न व्यग्र प्रतिक्षारत राष्ट्रका समर्थकले मेस्सीको उपस्थितिबाट कम्तिमा यो आशा गरेका छन्।
यता, अन्तरार्ष्ट्रिय करिअरको उत्तरार्धमा रहेका ३३ वर्षिय रोनाल्डोले पनि याे विश्वकप आफ्ना लागि अन्तिम अवसर भएको राम्ररी बुझेका छन्। त्यही कारण पाएका कुनै पनि मौका नगुमाइकन उनी करिअरकै उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेका छन्।
अब अन्तिम प्रश्न मात्र बाँकी छ, के ३० वर्षिय मेस्सीले आफ्नो जादु फेरि देखाउँदै अर्जेन्टिनालाई अन्तिम खेलमा उकास्न सक्लान् त?
(युएसए टुडेबाट अनुवाद)
प्रकाशित ९ असार २०७५, शनिबार | 2018-06-23 15:36:37
मार्टिन रोजर्सबाट थप
प्याराग्लाइडिङमा नेपाल आर्मी च्याम्पियन
आठौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताअन्तर्गत पोखरामा भएको प्याराग्लाइडिङ प्रतियोगितामा नेपाल आर्मीको त्रिभुवन क्लब टिम च्याम्पियन भएको छ।
उसु: निमा र मिनालाई स्वर्ण
आठौंअन्तर्गत १४ औं राष्ट्रिय उसुको थाउलोतर्फ आर्मीकाद्वय १२ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) की स्वर्णधारी निमा घर्ती मगर र मिना ग्लानले स्वर्ण...
जिम्न्याष्टिकमा राजुलाई ५ स्वर्ण
आठौंअन्तर्गत राष्ट्रिय जिम्न्याष्टिक प्रतियोगितामा एपीएफका राजु राईले ५ स्वर्ण जितेका छन्। राजुले थप १ रजत पनि जिते। सातौं राष्ट्रिय खेलकुदमा भने...
आठौं खेलकुद: २१ स्वर्ण जित्दै आर्मी एथ्लेटिक्स च्याम्पियन
नेपाल आर्मी क्लब आठौ राष्ट्रिय खेलकुदको एथ्लेटिक्स प्रतियोगिता च्याम्पियन भएको छ।
मेस्सीको छैठौं युरोपियन गोल्डेन बुटमा एमबाप्पे बाधक
पाँच पटकका किर्तिमानी युरोपियन गोल्डेन बुट विजेता लियोनल मेस्सी यस सिजन छैठौं गोल्डेन बुट जित्ने दाउमा छन्।
आठौं राष्ट्रिय खेलकुदः प्याराग्लाइडिङमा नेपाली सेना अगाडि
आठौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तरगत पोखरामा जारी प्याराग्लाइडिङमा नेपाली सेनाको त्रिभुवन क्लबले एक्यूरेसी र क्रसकन्ट्री तर्फका दुबै इभेन्टमा...
राहुलको स्वीकार्यता मोदीलाई टक्कर
राहुल प्रधानमन्त्री नै हुन्छन् हुन्नन्, अहिले नै भन्न हतार हुन्छ तर उनी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका लागि भने स्वीकार्य बनेका छन्।
नाकाबन्दीपछिको अध्ययनः भारतको अर्थतन्त्रमा नेपालको योगदान विश्वमै दुर्लभ
स्थानीयबाट खोसिएको जग्गामा यसरी ठडिएको हो हायात होटल
काठमाडौंमा राजदूत पुरीको फरक काम
विष्णु रिजाल काठमाडौं, - नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धबारे चर्चा गर्दा इतिहासका अनेक कालखण्डमा नेपालमाथि भारत हावी रहेको पाइन्छ। तर, आज प्रष्ट भन्न सकिन्छ, हिजोभन्दा आज त्यस्तो निर्भरता घटेको छ।
महेन्द्रसँग जोगिन जब बीपी हतियार खोज्दै ‘सिआइए एजेन्ट’ कहाँ पुगे
गोर्खाल्याण्डको नारा सत्ता हत्याउने खेल बन्यो: साहित्यकार छुदेन काविमो (अन्तर्वार्ता)
सारङ्गीको धुनले ठडियो बर्ताको ‘महल’
४ वर्षअघिसम्म चीनमा नेपाली हस्तकलाको ठूलो माग थियो। राष्ट्रपति सी चिनफिङले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कडाई गर्न थाले। महँगा महँगा थाङ्का उपहार लिने–दिने प्रवृत्तिमा ह्रास आयो।
विध्वंसात्मक त्यो बिपत ‘टोर्नेडो’ भएको कसरी पुष्टि भयो?
बारामा यसरी आयो अमेरिकामा आइरहने आँधी ‘टोर्नेडो’
डा. मदनलाल श्रेष्ठ
नेपाली स्याटलाईट अन्तरिक्ष केन्द्रमा सफलतापूर्वक जोडियो
नेपालखबर काठमाडौं, बैशाख ९ - अन्तरिक्षका लागि प्रक्षेपण गरिएको नेपालको आफ्नै भूउपग्रह ‘नेपाली स्याटलाईट वान’ पृथ्वीको तल्लो कक्षमा अवस्थित अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष केन्द्रमा जोडिने कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ।
कहिले संभव हुन्छ मंगल ग्रहमा मानवको अवतरण?
चलाएको केही समयमै सामसुङको फोल्डिङ फोनमा समस्या
रेन्जरलाई अभिभावक मान्ने गोरिल्लासँग सेल्फी
बैशाख ९ - कंगोस्थित भिरुंगा नेसनल पार्कमा दुई गोरिल्लासँग खिचिएको एक सेल्फी निकै भाइरल बनिरहेको छ।
पोर्न सामग्री नष्ट गरिएपछि आमाबुबाविरुद्ध क्षतिपूर्तिको मागसहित मुद्दा
रोमाले खेलाडीलाई ड्रेकसँग फोटो खिच्न प्रतिबन्ध लगानुको कारण यस्तो...
फुटबल मैदान जत्तिकै लामो पखेटा भएको विमान उड्यो पहिलो पटक
उद्योग मन्त्रालयको प्रस्तावः ५ करोडभन्दा कम विदेशी लगानी ल्याउन नदिने
तीन किलो सुनसहित चार विदेशी महिला पक्राउ, यस्ता छन् तस्करीका नयाँ तरिका
विवाहमा जातीय छुवाछुत, राजनीतिक अगुवाले नै खाएनन् भोज
जम्मा ६ कट्ठा जग्गामा २८ दलित परिवारः भूमाफियाले यसरी बेचिदिए सिंगै बस्ती
प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री भन्छन्ः सरकार प्रमुख भन्न पनि लाज लाग्छ
दुर्गममा बाँडिने नुनमा ३ करोड अनियमितता
यसरी बच्नुस् फ्रस्ट्रेसनबाट
खुँखार अपहरणकारी पण्डितले सेट्टी भेट्न किन पठाए जेलमा दूत?
अपहरण र फिरौतीलाई व्यवस्थित र व्यवसायिक बनाएका भिमसेन पण्डित, अमर टण्डन र उदय सेट्टीले एक अर्काबीच सम्पर्क बढाइरहेको गोप्य सूचना प्रहरीले पाएको छ।
४ वर्षअघिसम्म चीनमा नेपाली हस्तकलाको ठूलो माग थियो। राष्ट्रपति सी चिनफिङले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कडाई गर्न थाले। महँगा महँगा थाङ्का उपहार...
नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धबारे चर्चा गर्दा इतिहासका अनेक कालखण्डमा नेपालमाथि भारत हावी रहेको पाइन्छ। तर, आज प्रष्ट भन्न सकिन्छ, हिजोभन्दा आज त्यस्तो...
नेपालमा ‘मान्छे सिँगार्ने कला’ को जग बसाल्ने कमला
नेपाल फर्कंदा उनले उतैबाट किनेर १२० सिसिको होण्डाको मोटरसाइकल ल्याइन्। काठमाडौँ सहरमा कमलाले मोटरसाइकल गुडाएको देख्दा हेर्नेको भिड लाग्थ्यो।...